Milaterigii Son Heung-min ahaa ee Tababarka ku soo qaatay Koonfurta Kuuriya oo ku soo laabtay Magaalada London – Gool FM
(London) 17 Maajo 2020. Kaddib markii uu muddo todobaad ka hor ah soo dhammaystiray Tababar Milateri oo socday muddo saddex isbuuc ah ciyaaryahanka Kooxda Tottenham ee Son Heung-min ayaa dib ugu soo laabtay Magaalada London ee caasimadda Dalka Ingiriiska.
Tababarkan Son ku soo qaatay Koonfurta Kuuriya ayuu ku bartay taatikooyin is-difaac, dagaal iyo mid adkaysi, waxaana uu dib ugu soo noqday halka kooxdiisa ay ka dhisan tahay ee London.
Waajibaadkiisii qaranka Koonfurta Kuuriya markii uu soo dhammaystay xiddiga kooxda Tottenham ee Son Heung-min, waxaana uu ku soo laabtay Magaalada London, isagoo ka badbaadi doona in lagu sameeyeo karaantiil, waxaana uu kaliya tijaabo caddeynaysa inuu ka badqabo faafaha Corona maro marka uu gaaro UK.
Waxaa la soo guddoonsiiyey Son Heung-min askarigii ugu bandhigga fiicnaa ciidankii tababarka milateri la siiyey, waxaa uu awood u yeelan doonaa inuu si toos ah tababarka Spurs ula bilaabo marka ay tababarka ku soo laabtaan.
Inta aysan kooxdu tababarka ku soo laaban waxa uu berri oo Isniin ah uu tababar gaar ah oo uu naftiisa ugu diyaarinayo ciyaaraha Premier League ka bilaabi doonaan Magaalada London sida la filayo.
Tartanka horyaalka Premier League ayaa sida qorshuhu yahay, waxaa dib loo ambaqaadi doonaa bisha June ee soo aaddan.
Si kastaba ha noqotee, tababare Jose Mourinho ayaa dib u helaya Son Heung-min oo si buuxda uga soo kabsaday gacan uu ka dhaawacmay horrantii bishii Maarso ka hor inta aan ciyaaraha loo hakin faafaha Coronavirus.
Koox ka dheesha horyaalka Premier League oo Man United, Liverpool iyo PSG kaga horreysa tartanka loogu jiro saxiixa Kalidou Koulibaly